Isilimela 26, 2018 admin
Yahoo iquka BTC to USD yorhwebo isibini kwingxelo stock zemveli
Ingxelo entsha Yahoo ibandakanya uluhlu "khetha esitokisini zemali" ezifana American Express, Zobulumko lwezemali JP Morgan Chase kunye oluluhlu luquka crypto-to-USD yorhwebo ngababini eziliqela ezifana Bitcoin to USD.
Ukuqukwa cryptocurrencies nemithi emveli yinxalenye mkhwa normalizing-asethi zemali digital.
Yahoo! yeyona website wesithandathu enkulu ehlabathini kunye inkulu yesibhozo kwi US, ngokutsho Alexa.
Iingxelo Statistica ukuba ukusukela ngoJulayi 2015, Yahoo! yona ibe 151.2 million undwendwela rhoqo ngenyanga ukusuka kwi US.
Pharma giant Merck amalungelo awodwa omenzi wechiza usebenzisa blockchain ngenxa yokulwa MEDS zomgunyathi
Merck ofuna lomenzi ukusebenzisa blockchain umkhondo iimpahla njengoko ngapha lokuthengwa kwempahla.
Injongo apha anti-ngomgunyathi.
Merck iinowuthi yokufayilisha wayo ukuba ubuchwepheshe “kwenza ephephile, yokugcina oluthembekileyo iziphumo zokufunda kunye iinkcukacha eliphezulu kakhulu, ezinjalo ukuba eyona nzima ukulawula okanye ukucima okanye ngenye indlela abhucabhuce okanye alahlekelwe data efana, umzk. ngenxa kucinywe obelungacetywanga okanye ngabom okanye ngenxa ukonakala data.”
evuzayo exchange Korean ikubeka $ 620K ezixabisa ye crypto engozini
A exchange South Korea esekelwe sele oludale avuza ulwazi olubuthathaka malunga 19 abasebenzisi bayo, engase ukubeka $620,000 zeerandi cryptocurrency engozini.
Umsebenzi we Bitkoex, kunomfana esasungulwa ngo May, ubhale iidilesi email, iidilesi wallet, kunye namaqhosha abucala wemiqondiso KRM kwii-akhawunti zabo media ingxoxo zentlalo, onokwenza nabani na ulwazi ukufikelela asethi. Le nkampani bathi akukho asethi ziye ilahlekile.
Andreessen Horowitz uqala $ 300M fund crypto
Silicon Valley mali usomandla Andreessen Horowitz (a16z) uye wasungula esitsha $300 million fund sigxile cryptocurrency.
Le ngxowa-mali iya kubizwa “a16z” kwaye ngokukodwa ziyavela owayesakuba umtshutshisi federal kunye Assistant US Attorney Kathryn Haun njengenye yayo co-leya. Haun iye kwakhona sibizwe iqabane jikelele siqinise-WCED.
iqabane jikelele Chris Dixon wabonisa-mali crypto lwaluzakuba yaza oku- ixesha elide kutyalo-mali.
Dixon waqhubeka ukudibanisa:
“Sifuna iinkonzo enikwe elandelwayo crypto ukuba zisetyenziswe amakhulu ezigidi yaye ekugqibeleni ezigidi zabantu,” Dixon wabhala. “wemiqondiso Crypto na udidi asethi lokuzalwa lothungelwano digital, kodwa ixabiso lazo iqhutywa ebangela, practical isebenzisa amatyala.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 25.06.2018
$162M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje